Ukwelapha Amalahle we-Ultrasonic Wokukhiqiza Amandla - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-sonication yama-slurries wamalahle agqugquzela izinqubo ezehlukene phakathi nokukhiqizwa kwamandla kusuka kumalahle. I-Ultrasound ikhuthaza i-hydrogenation e-catalytic ngesikhathi sokushisa kwamalahle. Ngaphezu kwalokho, sonication ingathuthukisa indawo kanye extractability wamalahle. Ukungaxhunyiwe kwamakhemikhali okungaxhunyiwe okungaxhunyiwe ngesikhathi sokumiswa kwe-de-ashing ne-deulfurization kungagwenywa – ukufeza inqubo ngesikhathi esincane kakhulu. Ngisho nangenkathi yokuhlukanisa nge-froth flotation, ukusabalalisa okuhle kwama-particles kungathuthukiswa kakhulu yi-sonication.
I-ultrasound yamandla ingasetshenziswa ezinkambisweni eziningana zezimayini.
Ukushiswa kwamalahle wamalahle / inqubo yokulahlekelwa kwelahle
Amakhemikhali amakhemikhali angenziwa ngokukhiqizwa ngokweqile kumalahle kahlelo “Ukuqubuka kwamalahle”. Ukuqubuka kwamakhaza kungatholakala ngemigwaqo emibili – i-direct (DCL) ngqo kanye ne-liquefaction engaqondile (ICL).
Nakuba ukuqubuka okungaqondile kubandakanya ukungena kwamalahle, inqubo yokuguqula ngokuqondile iguqula amalahle ngokuqondile emanzini. Ngakho-ke, ama-solvents (isib. Tetralin) noma ama-catalysts (isib2) asetshenziselwa ukuhambisana nokucindezela okuphakeme kanye namazinga okushisa ukuze aphule isakhiwo somzimba wamalahle. Njengoba ama-hydrocarboni ayenamanzi ngokuvamile anezinga eliphakeme kakhulu le-hydrogen-carbon molar isilinganiso kunamalahle, i-hydrogenation noma inqubo yokulahla kaboni iyadingeka kukho kokubili ubuchwepheshe be-ICL no-DCL.
Ukukhipha Ubuningi Bamakhaza Oqondile
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi ukukhipha amalahle okuqondile kwamalahle ase-ultrasonically okuphuthumayo kungathuthukiswa ngokuphawulekayo. Izinhlobo ezintathu ezihlukene zelahle eliphansi le-bituminous amalahle zihanjiswe ku-solvent. I-ultrasound yenza ukuvuvukala futhi Ukuhlakazeka kuholele ekuvuneni okuphakeme kakhulu kwe-liquefaction.
Ukungafihli kwamalahle wamalahle
Amalahle angaguqulwa ngamakhaza amakhemikhali ngokucubungula okungaqondakali kokulahlekelwa kwamalahle (ICL) ngokulandela ukuguqulwa kwe-syngas ku-hydrocarbons ehlanzekile namafutha okuthutha okwenziwe umoya, njenge-methanol, i-dimethyl ether, i-Fischer-Tropsch-diesel noma i-fuel-like like fuel. Ukuhlanganiswa kwe-Fischer-Tropsch kudinga ukusetshenziswa kwezinto ezinjengezo-catalysts ezisekelwe ensimbi. Via ultrasonic ukuhlukaniswa kwezinhlayiyana, ukusebenza kahle kwalezi zinsiza kungathuthukiswa kakhulu.
I-UIP16000 - Inamandla kakhulu kunazo zonke i-Ultrasonic Inamandla-I-Ultrasonicator UIP16000 (16kW)
Funda kabanzi mayelana nokuvuselelwa kwe-ultrasonic catalyst
Ngokwelashwa kwe-ultrasonic, izinhlayiya zingaba zahlakazeka, i-deaggomerom futhi zihlukaniswe - kubangelwa ukuphakama kwe-particle phezulu. Ukuze i-catalysts, lokhu kusho ukuphakama okuphezulu okusebenzayo, okwandisa i-reactivity ye-particles 'reactivity.
Isibonelo: Nano-scale Fe catalyst
I-nanophase iron eyenziwe nge-sonochemically i-catalyst esebenzayo ye-Fischer-Tropsch hydrogenation ye-CO kanye ne-hydrogenolysis kanye ne-déshydrogenation yama-alkan, ikakhulu ngenxa yendawo yayo ephezulu (> 120mg-1). Amanani okuguqulwa kwe-CO ne-H2 kuya kuma-alkanes esisindo somzimba esincane aphindwe izikhathi ezingu-20 ngaphezulu kwegrimu ngayinye kaFe kune-particle (5 μm ububanzi) wensimbi yensimbi yokuhweba e-250 ° C futhi izikhathi ezingaphezu kuka-100 ezisebenza kakhulu ku-200 ° C.
Izibonelo ze-catalysts ezilungiselelwe nge-ultrasonically:
Yize noma ama-catalysts engadli ngesikhathi sokusebenza kwamakhemikhali, umsebenzi wabo kanye nokusebenza kahle kunganciphisa ngenxa yokwahlukana nokudutshulwa. Ngakho-ke, kungabonakala ukuthi izakhi zokuqala zibonisa umsebenzi ophezulu wokuzikhethela nokukhethwa kwe-oxygenate. Kodwa-ke, ngesikhathi ukuchithwa kwezinto ezithinta izidakamizwa kungenzeka ngenxa ye-aggregation. By ultrasonic irradiation catalysts kungenziwa kabusha njengoba the cavitational amabutho ukusabalalisa izinhlayiya futhi ususe ama-depositions avela phezulu.
Ukushisa kwamalahle: Gcina i-Ultrasonic De-Ashing ne-Desulfurization
Isimo se-ultrasonic singathuthukisa ukusebenza kwamazinga okugeleza kwamalahle, asetshenziselwa ukukhipha ama-deulphurization nokuqeda. Inzuzo enkulu yenqubo ye-ultrasonic yisuswa esisodwa ngesikhathi esisodwa somlotha nesulfure.  I-Ultrasound nokusakaza kwayo kwe-acoustic baziwa kakhulu ngemiphumela yabo kuma-particles. Ama-deaggomeromandla we-Power ultrasound futhi ahlakaza izinhlayiya zamalahle futhi aphuca ubuso bawo. Ngaphezu kwalokho, i-ultrasound ihlanza i-matrix yamalahle esusa isulfure nomlotha.
Ngokumisa umfudlana we-pulp, amandla aphakeme e-ultrasound asetshenziselwa ukuthuthukisa ukukhipha nokuxoshwa kwe-pulp. I-sonication ithonya uhlobo lwe-pulp ngokunciphisa okuqukethwe kwe-oksijini kanye nokuphazamiseka kwe-interfacial, kuyilapho ukwandisa inani le-pH nokushisa. Ngakho-ke, ukwelashwa kwe-ultrasonic kwelahle eliphakeme lesulfure kuthuthukisa i-desulphurization.
Ukunciphisa Ukusebenza Kwe-Hydrophobicity ye-Pyrite
Ultrasonically akhiqizwa oksijini radicals phezu-oxidize surface pyrite futhi kwenza sulfur ekhona emaspini kubonakala sengathi uhlobo sulfoxide amayunithi. Lokhu kwehlisa i-hydrophobicity ye-pyrite.
Izimo ezimbi ngesikhathi sokuwa kwe-ultrasonically cavitation ama-bubbles ezinkolweni azakwazi ukudala ama-radicals mahhala. Lokhu kusho ukuthi ie sonication yamanzi iphula izibopho ze-molecule ezikhiqiza ama-radicals mahhala we-OH kanye no-OH.
I • OH kanye • H yama-radicals mahhala akhiqizwa angakwazi ukusabela okulandelayo, kanje:
I-H2O2 ikhiqizwa ayizinzile futhi ichithe i-oksijeni enamandla ngokushesha. Ngakho okuqukethwe oksijini emanzini kwanda emva kokuma kwe-ultrasonic. I-oksijeni engasondayo, esebenza kakhulu, ingasabela ngezinhlayiya zamaminerali ezikhona ku-pulp futhi zinciphise okuqukethwe kwe-oksijeni ye-pulp.
I-oxidation ye-pyrite (FeS2) kwenzeka ngenxa yokusabela kwe-O2 ne-FeS2.
I-FeS + 2O2 + 2H2O = Fe (OH)2 + H2SO4
I-2FeS + 2O2 + 2H + = 2Fe2+ + S2O2- + H2O
Kusetshenziselwa izixazululo zokushisa amalahle ezingasetshenziswa ngaphansi kwezimo ezikhethiwe zokukhipha i-hydrogen ye-hydrogenation yamalahle. I-tetralin iyisombululo esiqinisekisiwe, esihlanganiswa ne-naphthalene ngesikhathi sokukhipha. I-naphthalene ingahlukaniswa futhi iguqulwe, i-hydrogenation futhi e-tetralin. Inqubo yenziwa ngaphansi kwengcindezi emazingeni okushisa athile ngokuya ngohlobo lwamalahle wamalahle nokuhlala cishe amahora amathathu.
Ukuvuselelwa kwe-Ultrasonic yama-coal oxidized Particles
Ukuhamba kwe-Froth kuyindlela yokuhlukanisa esetshenziselwa ukuhlanza nokulahlekelwa amalahle ngokusebenzisa amahluko e-hydrophobicity yawo.
Amalahle ahlanganisiwe kunzima ukuhamba, njengoba i-hydrophilicity yamalahle yanda. I-oxygen enamathele emzimbeni wamalahle yakha i-polar phenol (-OH), i-carbonyl (-C = O), neqembu le-carboxyl (-COOH), okukhulisa i-hydration ye-charal surface, ngaleyo ndlela, ukwandisa ama-hydrophilicity, ukuvimbela ama-reactants i-adsorbed.
I-ultrasonic ukwelapha izinhlayiya ingasetshenziswa ukususa izendlalelo ze-oxydation kusuka izinhlayiya zamalahle ukuze ubuso bezinhlayiya zamalahle ezixubile zivuselelwe kabusha.
Amalahle Amanzi Amalahle-Amafutha Namalahle-Amanzi
I-Ultrasonic ukugaya futhi Ukuhlakazeka isetshenziselwa ukukhiqiza ama-slurries ama-slide amahle wezinhlayiya zamalahle emanzini noma ngamafutha. Nge-ultrasonication, i-fine-size particle dispersion futhi ngaleyo ndlela ukumiswa okuzinzile kuvela. (Ukuze kube nokuzinza isikhathi eside, ukungezwa kwesimo sokuzinza kungahle kudingeke.) Ukuba khona kwamanzi kulawa mafutha wamakha amalahle namalahle-amalahle kubangelwa ukushisa okuphelele futhi kunciphise ukukhishwa okulimazayo. Ngaphezu kwalokho, amalahle ahlakazekile emanzini eba yi-proof-proof which facilitates the handling.
Izikhombo / Izincwadi
U-Ambedkar, B. (2012): I-Ultrasonic Coal-Wash for De-Ashing no De-Sulfurization: Uphenyo lokuhlola kanye neModetic Mechanistic. Springer, 2012.
Kang, W .; I-Xun, H .; I-Kong, i-X .; Li, M. (2009): Imiphumela yezinguquko emvelweni we-pulp ngemuva kwesimo se-ultrasonic ekuhambeni okuphezulu kwe-sulfur amalahle. Imayini Yezokwelapha Nezobuchwepheshe 19, 2009. 498-502.